Njirimara Anọ Na-ahụkarị na Companlọ Ọrụ Ndị Gbanwere Mgbasa Ozi Digital Ha | Martech Zone
M na nso nso nwere obi ụtọ iso CRMradio Podcast na Paul Peterson si Goldmine, na-ekwu maka otu ụlọ ọrụ, ma obere ma nnukwu, na-agba ahịa ahịa dijitalụ. Ị nwere ike gee ya ntị ebe a:
Jide n'aka na ịdenye aha ma gee ntị CRM Redio, ha nwetara ụfọdụ ndị ọbịa dị ịtụnanya na ajụjụ ọnụ banyere ha! Paul bụ nnukwu onye ọbịa na anyị jere ije na ajụjụ ole na ole, gụnyere usoro niile m na-ahụ, ihe ịma aka maka azụmaahịa SMB, echiche ndị na-egbochi mgbanwe, yana ọrụ CRM na-arụ na ọganiihu nke azụmaahịa.
Lọ ọrụ anọ a na-ahụkarị nke Translọ Ọrụ Na-agbanwe Digital Marketing ha:
Debe ego ahia na ire ahia nke bu pasent nke ego ha nwetara. Site na itinye ego onu ogugu, ndi otu gi choro maka uto ma nweghi ihe mgbagwoju anya mgbe igbanyere ndi mmadu ma obu ihe omuma. Otutu ulo oru di na 10% rue 20% mmefu ego, mana anyi tulere na ndi ulo oru ndi n’eto eto amatala ka ha rita ahia ha site n’inwe ihe karịrị ọkara ego ha.
Tọọ a ule ego nke ahụ bụ pasent nke ahịa na azụmaahịa gị. Enwere ohere dị ukwuu n’ule. Medialọ ọrụ mgbasa ozi ọhụụ na-enyekarị ụlọ ọrụ ọmarịcha ihe ịma aka na asọmpi ha mgbe ndị ọzọ na-adịghị egbu oge. Ma, n'ezie, enwerekwa itinye ego na mgbọ ọla ọcha na anaghị apụ apụ. Mgbe ị na-atụ anya na pasent nke mmefu ego gị bụ maka ule, ọ dịghị onye na-eti mkpu banyere ego furu efu - na ụlọ ọrụ gị nwere ike ịmụ ọtụtụ ihe gbasara otu esi emefu ego na-esote afọ.
Nọgide na-adọ aka ná ntị na Dekọọ njikọ ọ bụla na ntughari. O juru m anya na ọtụtụ ụlọ ọrụ na - enweghị ike ịgwa m ihe ndị mmadụ butere n’ahịa ha ugbu a. Nke a bụ ebe CRM dị oke mkpa. Dị ka ụmụ mmadụ, anyị na-emejọ site n'echiche nke anyị. Anyị na-ejikarị oge dị ukwuu na ihe ndị na-atọ anyị ụtọ ma ọ bụ ndị na-esiri m ike… na-ewe ezigbo akụ pụọ na atụmatụ ndị na-eto eto azụmaahịa anyị. Amaara m - Emekwara m ya, oke!
Tụlee ọ na-eme kwa ọnwa maọbụ kwa ọnwa iji nyere gị aka ikpebi ihe ị "kwesịrị" ime karịa ihe masịrị gị ime. Mgbe ụfọdụ, nke ahụ na-akpọkwu oku, ihe omume. Mgbe ụfọdụ, ọ bụ obere mgbasa ozi mmekọrịta, obere ịde blọgụ. Maghị ruo mgbe ị tụrụ ma nwalee!
Ekele dịrị ndị otu na Goldmine maka ajụjụ ọnụ! Onye njikwa ha, Gentile ndi amuma, enwere ụlọ ọrụ na ụlọ m tupu m kwaga ma anyị na-enwe nnukwu mkparịta ụka banyere etu mbọ ahịa na azụmaahịa si ada na ụlọ ọrụ ndị anyị na ha na-arụkọ ọrụ.
Goldmine nyeere ndị ọsụ ụzọ ụlọ ọrụ CRM aka karịa 26 afọ gara aga na ọkwa ha nwere na CRM bụ naanị ọbụbụenyi ha na ọchịchọ inyere gị aka ime mkpebi kacha mma na usoro CRM gị. Ha maara etu o si dị mkpa na azụmahịa gị, ọkachasị Ọ bụrụ na ị bụ obere azụmaahịa ọkara.
Bido na Goldmine
Tags: CRMdouglas karrọla edoAjụjụ ọnụahia mmefu egoAhịa Podcastpaul okonkwomba ozoule egotesting
Databox: Arụ Ọrụ Sochie ma Chọpụta Nghọta Na Oge